oge ochie ụdị Java – Taylor Lopes ツ Blog
oge ochie ụdị Java
Java bụ ihe na-abara asụsụ, ma ọ bụghị n'ụzọ zuru ezu, n'ihi na ọ bụghị ihe niile bụ ihe. Anyị na-enwe na-akpọ Ụbụrụ Types!
oge ochie ụdị
Urụk adịghị oge ochie ụdị;
N'ihi na onye ọ bụla oge ochie data ụdị e nwere a kwekọrọ ekwekọ Java na klas;
dum (byte, obere, Int, ogologo) ha, ndabara, Int, e na-eji "l" ma ọ bụ "L" mgbe ị chọrọ iji gosi ogologo;
Iji ntụpọ ụdị, eji-na- “0x” em hexadecimal (Int ise = 0xF; // 15 ntụpọ) e “0” maka octal (Int x = 0931);
sere n'elu ebe (ise n'elu, abụọ) ha, ndabara, abụọ, e na-eji "f" ma ọ bụ "F" iji gosi n'elu mmiri;
Ịsaka na-anọchi anya Unicode agwa 16 ibe n'ibe (unsigned);
Boolean ụkpụrụ ike ga-eji na a mgbatị ọrụ;
Nkedo bụ a akakabarede ọrụ nke a buru ibu ụdị ka a nta (doro), Ex: ogologo y = 10L; Int x = (Int) na;
Ọ dịghị mkpa mgbe nēfe ụdị kasị ala na elu, ọ dị mma (isịne), Ex: Int y = 10; ogologo x = y;
Ndị a echiche nwere ike ebubo dị ka ndị a:
COPEVE-UFAL – 2011 – UFAL – IT Analyst
Java oge ochie ụdị data dị:
a) boolean, Ịsaka, byte, obere, Int, ogologo, ise n'elu, abụọ.
b) boolean, eriri, Int, ise n'elu, abụọ.
c) boolean, eriri, obere, Int, ogologo, ise n'elu, abụọ.
d) boolean, Ịsaka, Int, ogologo, ise n'elu.
e) boolean, eriri, byte, Int, ogologo, ise n'elu.
O doro anya na ihe niile ọzọ na-asị “eriri” bụ a oge ochie ụdị na-na-ezighị ezi. A akwụkwọ ozi d) Ọ bụ ezughị ezu, Ya mere, Ọ na-anọgide na-ezo a) dị ka ziri ezi.
Cesgranrio – 2008 – TJ-RO – ikpe nyocha – Systems Analysis
em Java, ekenye ekewet = x + y bụ Ẹkot x = (T) (x + na), ebe T bụ ụdị x. Dabere na nke a premise, tụlee abụọ na-esonụ omume edoghi.
x = x + na;
The akpa akara na-edekọ, na nke abụọ akara ga-n'ịwa a ide oge njehie, x na y na-kwuru forem, karị, dị ka:
a) obere e Int
b) Int e mkpụmkpụ
c) Int e Ịsaka
d) Eriri e Int
e) Int e eriri
Ajụjụ a bụ na-akpali, ọ na-agwa dị iche iche echiche kwuru na nkwupụta a Post. Ọwọrọ cheta na gị na mkpa ime Nkedo (doro akakabarede) a ibu ụdị ka a nta. Ọzọ zuru ezu bụ n'ọnụ nke ajụjụ ya onwe ya, mgbe ị na-ekwu na x + y = bụ Ẹkot x = (T) (x + na). Rịba ama na a na ọnọdụ, na compiler ke Nkedo (T), contario nanị ala x = x + na. na n'ikpeazụ, mara na ajụjụ chọrọ ịmata nhọrọ ke akpa n'usoro ikpokọta, na nke abụọ akara ga-n'ịwa njehie. N'ihi ya, ọ anya dị ka:
a) Ebe x bụ nke ụdị Int, na obere na, anyị mkpa Nkedo maka bụghị n'ịwa njehie, maka obere (16 ibe n'ibe) Ọ bụ ihe na-erughị Int (32 ibe n'ibe), ndị ọzọ okwu, obere Int pụghịkwa ma doro akakabarede (mgbatị). Ya mere, na x + = y é Ẹkot x = (T) (x + na), anyị nwere x = (obere) (x + na). Lee Nkedo e mere n'ụzọ ziri ezi na a ga-enweghị nsogbu na n'ịtụgharị. Na nke abụọ akara (x = x + na), dịghị mgbatị chọrọ kasị (Int) na ma ọ bụ obere (obere), nke ga-eme na chịkọtara njehie. Nke a bụ ziri ezi ọzọ, n'ihi na ọ bụ doro anya na nke mbụ akara ga ikpokọta, na nke abụọ akara ga-n'ịwa njehie.
b) N'ebe a, anyị nwere ma na-akpa akara, dị ka nke abụọ ga-ikpokọta na-enweghị nsogbu, n'ihi na ntughari bụ isịne (site n'onye kasị nta ruo kasị ukwuu onwe ha mgbatị), ebe ọ bụ Int (x) ga-enweta obere (na) nkwupụta x = x + na. Ọ pụrụ ịbụ na a nhọrọ, n'ihi na ma edoghi ga ikpokọta.
c) Ma edoghi ga ikpokọta n'ụzọ ziri ezi, maka otu ihe a kọwara na akwụkwọ ozi b). Tinyere Ịsaka na-nwere 16 ibe n'ibe, dị ka obere. The naanị ihe dị iche bụ na mgbe n'ịrụ nchikota Int + Ịsaka nkwupụta x = x + na, Ọ ga-atụle ascii koodu nke agwa (Ịsaka) eji. n'ihi na ihe atụ, 97 kwekọrọ na agwa 'a’ ascii table.
d) Ma edoghi ga ikpokọta n'ụzọ ziri ezi. Ihe kpatara nke a bụ na compiler weere na mgbaàmà + ka concatenation (nkwụsị) na bụghị a nchikota, n'ịtụgharị Int (na) em eriri (x), mgbe ị na-agba ọsọ ahụ na nkwupụta x = x + na.
e) Ma edoghi agaghị ikpokọta, n'ihi na ọ dịghị ụzọ iji tọghata eriri (na) maka Int (x) mgbe ị na-agba ọsọ ahụ na nkwupụta x = x + na.
Total accesses: 7216
30 September 2012 Taylor Lopes	Java, oge ochie ụdị
2 reviews “oge ochie ụdị Java”
O nyeere m otutu,na-ekele!
24 de Maio de 2013 ka 12:29
Alexandre Ferreira kwuru:
4 de Janeiro de 2014 ka 13:42
Tụgharịa TEXTAREA nkwusa (WYSIWYG | CKEditor) A bụ ihe a ngwa ngwa enyemaka ị iwekota CKEditor na ha Web ngwa na dị nnọọ atọ nzọụkwụ. Apresentação Transformar suas tags TEXTAREA em um editor Web já não é uma tarefa complicada. Otu n'ime ihe ndị dị iche iche editọ i nwere ike ịhụ ...
Alexandre, kwuru: Magburu onwe-edozi nsogbu nile.
Taylor Lopes, kwuru: Evandro, ehihie ọma. anya, ma ọ bụrụ na koodu a na-eme n'ụzọ ziri ezi (na preset nọmba), eleghị anya bụ ụfọdụ nhazi ma ọ bụ ụkpụrụ gị player. Gbalịa hụ na teknuzu ntuziaka nke player ma ọ bụrụ na e nwere ụdị ọ bụla nke tupu formatting ...
Fr Reginaldo Luiz, kwuru: Ekele Taylor, ma didactic agaghị ekwe omume!! ị bụ otu Ihọd! amakụ na ekele maka-ekere òkè gị ahụmahụ!
evandro aguiar, kwuru: ehihie ọma, M mere ngwa na koodu generator, na-elekọta mmadụ nche nọmba, ya site niile ziri ezi, ma mgbe na-etinye iji na-agụ, na ihe ọkpụkpọ na-ewepụta a “efu” n'ihu koodu nọmba. ka m mara ihe nwere ike na-eme? Inwe ...
William Gigliozzi, kwuru: na-ekele unu, ebumnobi ma doo anya na. nnukwu isiokwu!
Rodrigo, kwuru: Otu nsogbu na-eme m. Ghara ịdị irè oke 'VMs Windows’
Nancy, kwuru: M nwere otu kpọmkwem nsogbu…
Copyright © 2017 taylorlopes.com ebe Oct 2012, 1.570.698 ohere | ugbu a